१८ महिना २ दिन प्रदेश प्रमुख बनेका शेरचन भन्छन्, ‘पदमुक्त गरेकोमा मुरीमुरी धन्यवाद छ राष्ट्रपतिज्यूलाई’
पोखरा । सोमबार सरकारले गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई हटाएर सीता पौडेललाई गण्डकी प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको छ । शेरचन माओवादी केन्द्र निकट हुन् भने पौडेल एमाले निकट ।
अरु प्रदेश प्रमुख पदमुक्त हुँदा सरकारलार्य अनेक लान्छना लगाउँदै बाहिरिन्छन् । तर, शेरचनले त सरकारलाई उल्टै धन्यवाद दिए । उनले आफुलाई पदबाट हटाइएकोमा उनले ‘अधिकारविहीन खुला जेलबाट मुक्त हुन पाउँदा खुसी रहेको’ टिप्पणी गर्न भ्याए । ‘पदमुक्त भएकोमा अत्यन्तै खुशी छु । मुरीमुरी धन्यवाद छ राष्ट्रपतिज्यूलाई’ उनले भने ।
‘पहिल्यै भनेको भए मैले राजीनामा दिन्थेँ,’ पत्रकार सम्मेलन गर्दै शेरचनले भने, ‘म नमान्दा–नमान्दै थामिएको पद थियो । रहरले भन्दा पनि बाध्यताले आएको थिएँ । संसद् विघटन हुने बेला नै राजीनामा दिने तयारी गरेँ । प्रचण्डले रोकेका कारण दिएको थिइनँ । अहिले आफैं हटाइयो ।’
उनले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष पद विगतमा अस्वीकार गरेको बताए । प्रदेश प्रमुख पनि अनिच्छाको पद भएको भन्दै उनले पदमुक्त हुन पाउँदा खुसी लागेको बताए ।
उनले आफू पदको लोभी नभएको प्रष्टीकरण दिए । ‘सन्त नेता क. मनमोहन अधिकारीको निधनपछि एमाले पार्टीको अध्यक्ष पदमा आउन प्रस्ताव गर्दा पनि मैले स्वीकार गरिनँ,’ शेरचनले भने, ‘न त पदकै लागि वैचारिक आस्था बम्बैको कोठीमा बिक्री गर्ने व्यक्ति हुँ ।’
म पदको लागि राजनीति गरेको व्यक्ति होइन । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको कार्यकाल समाप्तिपछि राष्ट्रपतिको लागि मलाई प्रस्ताव आयो । मैले अस्वीकार गरेँ । त्यस्तै ज्ञानेन्द्रकालमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आउँदा पनि ठाडै इन्कार गरेको व्यक्ति हुँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक कमरेड पुष्पलाल, क.यज्ञदेव आले, क.निर्मल लामा र क. मोहन विक्रम सिंह जस्ता शीर्षस्थ नेताहरुको निकटमा रहेर सक्रिय राजनीतिक संघर्षमा आफ्नो जीवन समर्पित गरें । पदका लागि कुनै प्रकारको बार्गेनिङ गरिनँ ।